Nezvedu | Hebei Chuangqi Vehicle fittings Co., Ltd.
Hebei Chuangqi Vehicle fittings Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2020 uye ari nyanzvi rabha hosipaipi mugadziri.
Iyo fekitori inovhara nzvimbo yemahekita mashanu uye nzvimbo yemusangano iri 45,000 mativi emamirimita. Tine yakakwana irabha yekusanganisa maitiro, inotonhora feed extrusion maitiro, microwave vulcanization maitiro uye yakakwira-yekumhanyisa maitiro uye imwe yekugadzira mitsara.
Kupfuura makore anopfuura gumi ekuenderera mberi nekuedza, kambani yakawedzera hunyanzvi hwekudyara uye yakaunza vashandi vehunyanzvi. Iyo kambani ine gumi nembiri mainjiniya nevashandi vehunyanzvi, 2 mainjiniya, mainjiniya mana, uye vatanhatu vakuru vehunyanzvi. Iyo kambani ine michina: imwe hombe blister inogadzira muchina, maviri polyurethane anodira uye anopupa furo, imwe hombe 200-ton hydraulic yekudhinda, imwe 50-ton turu yekudhinda, imwe yekuchenesa inogadzira michina, uye matatu ekumisikidza shear yekucheka michina. Anopfuura makumi maviri seti ekugadzirisa michina. Kubva pakutanga kweimwe kugadzirwa kweyakaomarara polyurethane furo kuumbwa kune yazvino vhoriyamu Kuumbwa uye compression Kuumbwa kwekugadzira maitiro, isu takaunganidza zvakapfuma ruzivo. Muna 2009, kambani akapedza zvachose maindasitiri goho ukoshi mamiriyoni 10.01 Currencykuva uye akapedza yokuchengetera mutero 250,000 Currencykuva.
Iyo kambani ine zana Vazhinji vatengesi uye mushure-yekutengesa sevhisi zvitoro nemahofisi zvakagadzira yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi sosi yekurerutsa vatengi kushushikana.
Hebei Chuangqi Vehicle Fittings Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2020.
Iyo fekitori inovhara nzvimbo yemahekita mashanu uye nzvimbo yemusangano iri 45,000 mativi emamirimita.
Chuangqi ane wegore kugadzirwa inokwana mamiriyoni 50 metres.
Iyo kambani ine gumi nemaviri ouinjiniya nehunyanzvi vashandi.
Ese anowirirana neanopfuura makumi matatu epamba maOEMs akadai saJinlong, Yutong, Ankai, uye Zhongtong.
Yakazara Kubuda Kukosha
Muna 2009, kambani akapedza zvachose maindasitiri goho ukoshi mamiriyoni 10.01 Currencykuva.
Isu tinonyanya kugadzira hoses dzeindasitiri, senge mweya hoses, hoses dzemvura, hoses dzemafuta, hoses dzemoto, hydraulic hoses uye zvikamu. Chuangqi ibhizimusi rinokurumidza kukura rinogadzira kugadzirwa kweiyo yakachena rabha hoses uye rakarukwa marabha hoses, iine gore rega rekugadzira kugona kwemamirioni emamirioni makumi mashanu.
Ose iwo akaenzana neanopfuura makumi matatu epamba maOEMs akadai saJinlong, Yutong, Ankai, uye Zhongtong, uye nemapazi epasi rese eVOLVO neIndia, New Zealand, Thailand, Taiwan, Poland, Israel, Britain, Egypt, Spain, Turkey, Brazil, Singapore, Germany uye nyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu vakawana nzvimbo dzekutsigira.
Tichiomerera kugumi re "kuenderera mberi nekuvandudza, kugona, kunaka kwakanyanya, uye kugutsikana kwevatengi", isu tinobata zvinehunyanzvi hunyanzvi hwenyika dzepasi rese neruzivo rwechigadzirwa, tinogadzira nekugadzira zvigadzirwa zvitsva, uye tinopa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Vadiwa vatengi vekare uye vatsva, mune inogara ichichinja 21st century, iyo kambani ichaonekwa pamberi pako ine chitarisiko chitsva, ngatifambei takabatana kuti tigadzire yakajeka uye yakajeka mangwana. isu tinoshuvira kuti zvigadzirwa zvedu zvinokwanisa kusangana nevatengi zvinodiwa kusvika pamwero mukuru uye kuvabatsira kuti vawane yakawanda uye yakawanda chikamu chemusika.